I-Cocktails kunye noSombululo sokuSombulula noNick noNora
Ambalwa ama-Hollywood franchises ayephumelele njengoluhlu lwe- Thin Man , olubonisa uWilliam Powell kunye no-Myrna Loy njengabantu abaxhwankqisayo, abacuphi abanobukhohlakele uNick noNora Charles, ukuxazulula ubundlobongela be-Martine ngakwesinye icala kunye nenja yabo encinane i-Asta ixhama kwelinye.
Ifilimu yokuqala yayiyi-bhokisi-ofisi ye-smash yokuba i-duo yenza i-movie yeesithandathu kwiminyaka engaphezu kwe-12. Izicwangciso zazininzi ngokufanayo, kodwa i-screen chemistry ebonakalayo phakathi kweenkwenkwezi ezimbini zagcina izibukeli zibuyela emva, nangona xa umgangatho wokubhala awuzange uqhathanise ukuhleka kwe-original.
Nalu uluhlu lwazo zonke iivela ezithandathu ze "movie".
Iyokuqala kunye neyona nto ibhetele kwinqaku le-movie ye-classic, i -Thin Man izisa iCharleses kunye ne-antics ye-Asta, i-fox, kunye ne-inveterate scene stealer. Ngokucwangciswa ngokuqinisekileyo kunye nenyaniso kwinveli yecala likaHammett, ivakalelwa ngokutsha kunye nehlekisayo. Ungaphuthelwa yinto yokujolisa ku-Nicky kunye nomthi weKrisimesi kwindawo yabo yokuhlala yaseNew York.
Eyona nto ibonakale njengefilimu yokuqala, Emva kokuba umntu onqamlekileyo eqala apho i-original ishiywe khona, kunye noNick noNora bebuya e-West Coast ngesitimela bevela kwiholide yabo ephumayo eNew York. Iquka ukubulawa kwamanzi phakathi kwezihlobo eziphakamileyo zaseNora, uAsta ugijima kumncintiswano kuMnu. Asta, kunye nomncinci kakhulu uJimmy Stewart inendima ephambili.
Ifilimu yesithathu ithatha emva kokuzalwa kukaNick, Jr. kwaye ibuyisela uCharles back eNew York. Omnye Umntu ongeyena mfana akafanekanga njengamafilimu amabini okuqala, kodwa ehlala edlala kunye nokuzonwabisa. Imfihlakalo yokubulala ilungeleke kakhulu, kodwa yinto embi kakhulu uNick noNora, abazali abahle ukuba banjalo, abanakuchitha ixesha elininzi lokusela njengoko bafuna.
Ingeniso yesine kulolu chungechunge yile-ke kodwa isasebenza. Kwi- Shadow yoMntu ongeyena , uNicky omncinci udala ngokwaneleyo ukuthetha, kodwa usenakuvimbela ukusela kwasekhaya umzali. (Andizibukeli la mafilimu ukubona uNick Charles ubisi oluselayo .) Siyabonga ezulwini uNick noNora bashiya le nkwenkwe ekhaya xa behamba ngokunyanelana kunye neentambo zamahashe. Ukubulawa kwenzeka kwi-racetrack ngeli xesha, kodwa icebo lihle libaleke.
Le nto ingaba yinto engaphantsi komtya womntu . U-Nick ufumene ibhola lakhe kakuhle, kodwa uzaliswe ngecider, kwaye uya ekhaya kwiSycamore Springs ukuze abone ukungathobeli, utata omdala ondibathandayo. Yonke into enhle kakhulu, kwaye ukubulala emnyango wendlu yokhokho kuluhlaza. Ukukhutshwa kwexesha lemfazwe mhlawumbi kwakha i-spy plot spy, kwaye i-Hayes Inkqubo yoPhicotho yokuCwangcisa iqinisekisile ukuba i-Nora yaya kuthi i-slinky izambatho ziza kubanjwa ngaphezu kokutyhila. Andiyithandanga, kodwa kusekhona uNick noNora, baqhekeza ubulumko.
Ifilimu yokugqibela kwichungechunge ifana nayo - iiklabhu ezitshatayo, i-jazz eshushu, kunye nekhasino yokugembula. I-hot-cha! Umgcini-mkhosi uhlaselwa, kwaye uNick, uNora, kunye no-Asta baqokelela kangcono abasesikhundleni abasesikweni kwaye basombulula i-caper. Baye bahlanganiswa ngepopayi engummangaliso - uGloria Grahame njengomculi wengoma, uJayne Meadows njengentombi yomntu, kunye noKeenan Wynn njengeJohnny-joint joint johnny owanceda abo bantu bawafumana. Akunakulungile njengabini bokuqala, kodwa akubi.
Iimifanekiso ezi-7 ze-Classic ezichaphazela abazalwana beCoen
6 IiFilimu eziClassi ezihamba kunye neGene Kelly
Iikhosikidi ezihamba kunye noRobert Redford
Kutheni i-Formation yeIonic Compounds Exothermic?
Ubungcali boLuntu baseWashington, DC
Imfazwe Yehlabathi II: I-Torch Operation